कर्णालीका ४ सांसदको निर्णयमा असन्तुष्ट एमालेले दियो भ्याकेट निवेदनः पेशी कहिले ? - Jyotinews
कर्णालीका ४ सांसदको निर्णयमा असन्तुष्ट एमालेले दियो भ्याकेट निवेदनः पेशी कहिले ?
ज्योतिन्यूज २०७८ असार ७ गते १७:१८
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका चार जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश नमान्दै एमालेले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालका अनुसार भ्याकेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। त्यसको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।